Savorovoro tany Toamasina :: Karohina ilay vehivavy nilaza ho nahita lohan’olona tao amina trano iray • AoRaha
Savorovoro tany Toamasina Karohina ilay vehivavy nilaza ho nahita lohan’olona tao amina trano iray
Mbola arovan’ny mpitandro filaminana mafy ny trano iray any Morarano-Toamasina hatramin’ny omaly. Misy mikasa handoro io tranon’olona io ka izay no voalaza fa antony hiarovana azy. Ireo tompony kosa efa nafindra toerana saingy miatrika ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana.
Taorian’ny savorovoro tamin’ny alin’ny zoma teo ka hatramin’ny omaly hariva dia tsy mbola hita ny vehivavy iray mpiasa an-trano, izay nilaza ho nahita lohan’olona tao amin’io trano niteraka savorovoro, tany Toamasina io. Vehivavy iray mpiasa an-trano vao niditra ka nirahina nisasa tany amin’ny efitra fidiovana no voalaza fa nihavian’ny olana.
“Nilaza ho nahita lohan’olona tapaka tao amin’ilay trano ilay vehivavy. Nampandre sy niantso mpitandro filaminana avy hatrany izy. Niely vetivety teo amin’ny manodidina ny feo, taorian’izay. Vokany, feno olona nikasa hanao fitsaram-bahoaka ny tompon-trano. Nahavariana ny olona rahateo ny fisian’ny soratra hoe: “mitady mpanampy” sy mpanofa trano tsy mety miala mandritra ny taona maro teo amin’io trano io”, hoy ny loharanom-baovao avy any an-toerana.
“Tonga haingana teo amin’ilay toerana ireo polisy sy ny zandary maro. Nosavaina avy hatrany ny tranon’ilay olona saingy tsy nahitana na inona na inona aloha hatreto. Voatery nanao tifi-danitra ireo mpitandro filaminana, tamin’io alina io, satria nihabetsaka ireo olona sady mikasa handroba ny trano. Noho io antony io no tsy maintsy namindrana haingana an’ireo tompon-trano avy hatrany”, hoy ny fanazavana avy amin’ireo mpitandro filaminana any an-toerana.
Hatramin’ny omaly, tsy mbola mifarana ny famotorana momba ity tranga ity. “Misy ireo miahiahy ny amin’ny hoe mandra-pahatonga an’ireo mpitandro filaminana nisava ny trano no efa namindrana an’izay zavatra hitan’io mpiasa io”, hoy hatrany ny loharanom-baovao.
Hatreto anefa, tsy mbola manana fahamarinana ireo mpitandro filaminana sy manampahefana any Toamasina ny amin’ny filazana hoe mitombina na tsia ny ahiahin’ny olona. “Miankina amin’ny vokatry ny fanadihadiana no hahafantarana ny marina”, hoy izy ireo raha nihaona tamin’ny mpanao gazety, afak’omaly tany Toamasina.
Firehetana teny Andavamamba :: « Aza vonoina i mamanay », hoy ilay zaza nieren-doza tamin’izy dimy mianaka